ညဘက်တွေ ကလေးအငိုမတိတ်လို့ မိခင်ရော၊ ကလေးရော အိပ်ရေးပျက်ပေါင်းများနေပြီလား ? – Trend.com.mm
မိခင်သစ်များအနေနဲ့ ညဘက်အချိန်တွေ ကလေးအငိုတိတ်ပြီး အိပ်ပျော်အောင် မနည်းချော့သိပ်နေရပါသလား ? ဖေဖေတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ သင်ဟာ ညအချိန်တွေ ကိုယ့်ရင်သွေးနဲ့အတူ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်စေမယ့် နည်းလမ်းရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်တော့ Three Day Nanny က မေမေတွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…
ကလေးက ငိုနေပြီဆိုရင် ဘာကြောင့်ငိုနေလဲဆိုတာကို အကြောင်းရင်းသိအောင်လုပ်ပြီးမှ ချော့မြူတာက ပိုထိရောက်ပါတယ်။ ကလေးဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲ အငိုတိတ်စေချင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ အတင်းပွေ့ချီနေရင်လည်း ကလေးက အငိုရပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကလေးငိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်း သိအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
ကလေးကို ညဘက်တွေ လန့်မနိုးစေဘဲ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်စေချင်တယ်ဆိုရင်
အိပ်ရာမဝင်ခင် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် အဝတ်စားမျိုး ပြင်ဆင်ပေး ကလေး နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်နေရင် လူကြီးလည်း အနည်းဆုံးတော့ အိပ်ရေးဝပါတယ်။ နှစ်ယောက်လုံး ကောင်းကောင်းအနားယူနိုင်ဖို့အတွက် အိပ်ယာကိုရော ၊ ညအိပ်ဝတ်တဲ့ အဝတ်စားတွေပါ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် ကလေးတွေအားဝတ်ဆင်ပေးသင့်ပါတယ်။
အမေတွေလည်း အချိန်ပြည့် မနားတမ်းအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကလေးနှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်နိုင်ဖို့အတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေအောင် ကိုယ်ပိုင် အချိန်ဇယားလေးလုပ်ထားပြီး စီမံခန့်ခွဲတာကလည်း အထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်။
ကလေးကို ပွေ့ချီရင်း အိပ်ပျော်အောင် ချော့သိပ်နေစဉ် ကလေးတကယ်အိပ်ပျော်နေပြီလား၊ နိုးတစ်ဝက် အိပ်တစ်ဝက်ဖြစ်နေလားဆိုတာ သေချာသိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်ဘာမှမသိတော့လောက်အောင် အိပ်ပျော်နေပြီဆိုရင်တော့ ကလေးကိုတစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ပြောင်းပေးလည်း သူနိုးလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကလေးက သင်နဲ့မှ အိပ်တတ်တယ်၊ သင့်အပေါ်မှာပဲ အိပ်ပျော်အောင်အိပ်တတ်တယ်ဆိုရင်
ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ဖျော်သောက်ထားပါ။ မွေးခါစ ကလေးဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ နိုးကြားကြားရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ ဘာလို့ဆို သင်ကအိပ်ပျော်နေရင် ကလေးက ကြမ်းပေါ်လည်းရောက်ချင်ရောက်နေတတ်ပါတယ်။ ကလေးကိုမျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်နိုင်မှဖြစ်ပါမယ်။
ကလေးကို အိပ်ပျော်အောင် ချော့သိပ်နေစဉ် ကလေးမျက်လုံးလေးနဲ့ ဆုံအောင် သေချာစိုက်ကြည့်ပေးပါ။ တစ်ခုခုကိုစိုက်ကြည့်ရင်း မျက်လုံးညောင်းပြီး အိပ်ချင်သလိုလည်း ဖြစ်စေသလို၊ သူတို့အကြည့်လေးတွေက သင်တို့ကို နောက်တစ်နေ့မှ လန်းဆန်းစွာနိုးထနိုင်ဖို့အတွက် အားအင်လေးတွေပါပဲ။ ကဲ ဒီအချက်လေးတွေကိုသာ သတိထားပြီး ဆင်ခြင်အိပ်မယ်ဆို သင့်ကလေးလည်း အငိုနည်း ၊ သင်လည်း အိပ်ရေးဝတော့ အလုပ်လုပ်ရတာလည်း စိတ်ကြည့်တာပေါ့။
မိခငျသဈမြားအနနေဲ့ ညဘကျအခြိနျတှေ ကလေးအငိုတိတျပွီး အိပျပြျောအောငျ မနညျးခြော့သိပျနရေပါသလား ? ဖဖေတှေလေညျး ဒီလိုပါပဲ။ သငျဟာ ညအခြိနျတှေ ကိုယျ့ရငျသှေးနဲ့အတူ နှဈခွိုကျစှာအိပျပြျောစမေယျ့ နညျးလမျးရှာဖှနေတေယျဆိုရငျတော့ Three Day Nanny က မမေတှေရေဲ့လမျးညှနျမှုလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ…
ကလေးက ငိုနပွေီဆိုရငျ ဘာကွောငျ့ငိုနလေဲဆိုတာကို အကွောငျးရငျးသိအောငျလုပျပွီးမှ ခြော့မွူတာက ပိုထိရောကျပါတယျ။ ကလေးဘာဖွဈမှနျးမသိပဲ အငိုတိတျစခေငျြတာတဈခုတညျးနဲ့ အတငျးပှခြေီ့နရေငျလညျး ကလေးက အငိုရပျမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကလေးငိုရတဲ့အကွောငျးရငျးကိုလညျး သိအောငျလုပျဖို့အရေးကွီးပါတယျ။
ကလေးကို ညဘကျတှေ လနျ့မနိုးစဘေဲ နှဈခွိုကျစှာအိပျပြျောစခေငျြတယျဆိုရငျ
အိပျရာမဝငျခငျ သကျတောငျ့သကျသာဖွဈစမေယျ့ အဝတျစားမြိုး ပွငျဆငျပေး ကလေး နှဈခွိုကျစှာအိပျပြျောနရေငျ လူကွီးလညျး အနညျးဆုံးတော့ အိပျရေးဝပါတယျ။ နှဈယောကျလုံး ကောငျးကောငျးအနားယူနိုငျဖို့အတှကျ အိပျယာကိုရော ၊ ညအိပျဝတျတဲ့ အဝတျစားတှပေါ သကျတောငျ့သကျသာဖွဈအောငျ ကလေးတှအေားဝတျဆငျပေးသငျ့ပါတယျ။
အမတှေလေညျး အခြိနျပွညျ့ မနားတမျးအလုပျလုပျဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ကလေးနှဈခွိုကျစှာအိပျပြျောနိုငျဖို့အတှကျ ပိုမိုအဆငျပွခြေောမှစေ့အေောငျ ကိုယျပိုငျ အခြိနျဇယားလေးလုပျထားပွီး စီမံခနျ့ခှဲတာကလညျး အထောကျကူဖွဈစပေါတယျ။
ကလေးကို ပှခြေီ့ရငျး အိပျပြျောအောငျ ခြော့သိပျနစေဉျ ကလေးတကယျအိပျပြျောနပွေီလား၊ နိုးတဈဝကျ အိပျတဈဝကျဖွဈနလေားဆိုတာ သခြောသိအောငျလုပျဖို့လိုပါတယျ။ တကယျဘာမှမသိတော့လောကျအောငျ အိပျပြျောနပွေီဆိုရငျတော့ ကလေးကိုတဈနရောမှ တဈနရောသို့ပွောငျးပေးလညျး သူနိုးလာတော့မှာမဟုတျပါဘူး။
ကလေးက သငျနဲ့မှ အိပျတတျတယျ၊ သငျ့အပျေါမှာပဲ အိပျပြျောအောငျအိပျတတျတယျဆိုရငျ
ကျောဖီလေးတဈခှကျဖြျောသောကျထားပါ။ မှေးခါစ ကလေးဆိုရငျ သငျ့အနနေဲ့ နိုးကွားကွားရှိနဖေို့လိုပါတယျ။ ဘာလို့ဆို သငျကအိပျပြျောနရေငျ ကလေးက ကွမျးပျေါလညျးရောကျခငျြရောကျနတေတျပါတယျ။ ကလေးကိုမကျြစိဒေါကျထောကျကွညျ့နိုငျမှဖွဈပါမယျ။
ကလေးကို အိပျပြျောအောငျ ခြော့သိပျနစေဉျ ကလေးမကျြလုံးလေးနဲ့ ဆုံအောငျ သခြောစိုကျကွညျ့ပေးပါ။ တဈခုခုကိုစိုကျကွညျ့ရငျး မကျြလုံးညောငျးပွီး အိပျခငျြသလိုလညျး ဖွဈစသေလို၊ သူတို့အကွညျ့လေးတှကေ သငျတို့ကို နောကျတဈနမှေ့ လနျးဆနျးစှာနိုးထနိုငျဖို့အတှကျ အားအငျလေးတှပေါပဲ။ ကဲ ဒီအခကျြလေးတှကေိုသာ သတိထားပွီး ဆငျခွငျအိပျမယျဆို သငျ့ကလေးလညျး အငိုနညျး ၊ သငျလညျး အိပျရေးဝတော့ အလုပျလုပျရတာလညျး စိတျကွညျ့တာပေါ့။